Knowledge Hub Archives - AYA SOMPO Insurance
လွယ်ကူမြန်ဆန် အာမခံသက်တမ်းစစ်ရန်Register ဖုန်းနံပါတ် တစ်မျိုးထဲနဲ့ အာမခံသက်တမ်းကို My AYASOMPO မှာ စစ်လို့ရနိုင်တယ် ဆိုတော့ အချိန်မကုန် လူမပန်းဘဲ သက်သာစေနိုင်မှာပါ။ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြန်ကြည့်ဖို့မလိုပဲ အာမခံထားရှိသူရဲ့...
လေ့လာမှုများအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မီးအန္တရာယ် မတော်တဆမှုပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၇၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၆၃၀၀ နီးပါးခန့် အိမ်ခြေရာမဲ့...
မိမိကားကို အမြဲစစ်ဆေးပေးနေတာဟာ ကားရဲ့ ခံနိုင်ရည် တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလို မောင်းနှင်တဲ့သူရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အပြင်မထွက်ခင် မိမိကားကို ဘာတွေစစ်ဆေးသင့်သလဲ? အင်ဂျင်ဝိုင်ပမာဏနဲ့ အင်ဂျင်လဲရမယ့်ရက်ကို အမြဲစစ်ပါ။ ကားထဲမှာတဲ့ရှိတဲ့ ရေ၊ဆီ၊...
ယာဉ်မတော်တဆမှုများသည် အမြန်လမ်းများ၌ အများဆုံးဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက်ပိုမောင်းခြင်းသည် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ WHO မှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၁.၃၅ မီလီယံနီးပါး...
အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တခြားကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းခရီးတစ်ခုထွက်တော့မယ်ဆိုပါက လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ခရီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။ ခရီးလမ်းမှာကြိုတင်မှန်းဆထားလို့မရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်ပဲ သွားလာနိုင်ဖို့အတွက် ခရီးသွားအာမခံကို ရယူထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးသွားလာစဥ် မတော်တဆ မော်တော်ယာဥ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင်...
Both are ways to prevent health care costs. But are the differences? Saving Money for Medical...
လမ်းမထက်မှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ မော်တော်ယာဥ်မတော်တဆမှုတွေကြောင့် ငွေကြေးအရဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ AYA SOMPO အာမခံမှ အလုံးစုံမော်တော်ယာဥ် အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ AYA SOMPO အာမခံရဲ့...
လမ်းမထက်မှာ မောင်းနှင်တဲ့အခါ ယာဥ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးအောင် ကြိုတင်တွက်ဆထားသင့်သလို မထင်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကြုံလာရတယ်ဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ စဥ်းစားထားရပါမယ်။ အပူအပင်ကင်းကင်း ပျော်ရွှင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ အဖြေကတော့ အာမခံပါပဲ။ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေချိန်မှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ငွေကြေးအခက်အခဲနဲ့၊...
ယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ကြုံတွေ့တဲ့အခါ လျော်ကြေးဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?ပထမဦးစွာ AYA SOMPO အာမခံ၏ Claim Hotline – 09 777 100 999 ကို...
မီးဘေးအန္တာရာယ်ဆိုတာ ရန်သူငါးပါးထဲမှာ တစ်ပါးအပါအဝင် ဖြစ်တာကြောင့် “မီးဘေးရှောင် မလောင်ခင်တား “ဆိုသည့်အတိုင်း ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် မီးအာမခံထားရှိသင့်ပါတယ်။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့်အရာများနှင့် ရရှိနိုင်မည့်အကာအကွယ်များကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ မီးအာမခံထားခွင့်ရရှိမည့်အရာများမှာ အဆောက်အဦးများ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊အိမ်ထောင်ပရိဘောဂတွေလို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများအပြင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများအတွက် ပါအာမခံထားရှိနိုင်မှာပါ။ မီးအာမခံမှ ကာကွယ်ပေးသောအရာများမှာ မတော်တဆမီး၊ ပေါ့ဆမီး၊...
စိတ်အေးချမ်းသာစွာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာမခံထားကြပါစို့ ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ ကံအကြောင်းများစွာရှိသည့်အတွက် ဘယ်လိုပဲ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ယာဥ်မျိုးတွေ အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်နေပါစေ ဖြစ်လာနိုင်အခက်အခဲများတွက် AYA SOMPO အာမခံရဲ့ ပြည်တွင်း...